Indlu encinane / iB&B de Bongerd (Igadi yeziqhamo) - I-Airbnb
Indlu encinane / iB&B de Bongerd (Igadi yeziqhamo)
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguBernadette
Umbindi ophakathi kweedolophu ezintle zaseZutphen kunye neDeventer yindlu yethu entle enesauna yabucala. Kwilifa laseBongerd uya kufumana uxolo kunye nokuphumla. ICottage inomnyango wayo wokungena. IHet Loo Palace, iSpa Bussloo, amabala egalufa kunye neentlobo ngeentlobo zeendawo zokutyela ezisemgangathweni zityebisa okusingqongileyo. Ukuhamba ngebhayisikili kunye nokuhamba phakathi kwezinto ezininzi ezithandwayo, kumda weVeluwe. Izithuthi zikawonke-wonke zikumgama wokuhamba. Ukurenta ibhayisekile kunye nokupaka kwisiza kunokwenzeka.
I-cottage inekhitshi yayo kunye nesitovu, ifriji kunye ne-coffeemaker. Kumgangatho wokuqala uya kufumana igumbi lokulala elinothando elinebhedi ebanzi ephindwe kabini. Igumbi lokuhlambela lineshawa, isinki kunye nendlu yangasese. Ungasebenzisa kwakhona i-sauna ebekwe kwindawo yokuhlambela simahla. Singakunika isidlo sakusasa esimnandi (ukhetho). Iindleko ezongezelelweyo € 10 pp
Singakwazi ukuhlalisa abantu abaninzi, nceda uqhagamshelane nathi ngolwazi oluthe kratya. I-cottage ijikelezwe yigadi yethu entle, ngeentsuku ezishushu ungonwabela ilanga noxolo kwaye ebhentshini.
4.67 · Izimvo eziyi-162
Phakathi kweVeluwe kunye nomlambo i-IJssel, phakathi kwezixeko ezintle zaseZutphen, eDeventer naseApeldoorn, kukho idolophu encinane yaseVoorst.
Indawo ethandekayo yokuhamba kunye / okanye ukukhwela ibhayisekile kwaye ukonwabele iindawo ezininzi kunye neefama ezintle (IJssel). Kuthekani nge-bootcruise eZutphen okanye iikhosi zegalufa ezizodwa. Okanye Ukuthenga kwiDeventer!